Ijerena ifotony ny olana: antsoina hifandinika ireo mpanoratra boky | NewsMada
Ijerena ifotony ny olana: antsoina hifandinika ireo mpanoratra boky
Mitohy hatrany ny hetsika ho fampitiavana ny vakiboky. Hataon’ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny serasera ho vaindohan-draharaha ny fanomezan-kasina ny boky sy ny fampitiavana indray ny vakiboky, anatin’ny politikam-pirenena momba ny boky. Fantatra fa hitodika amin’ireo rantsa-mangaika mandrafitra ny tontolon’ny boky eto Madagasikara indray ny fijerena ifotony, ka hatomboka amin’ireo mpanoratra, izay fototra voalohany izany.
Misy, araka izany, ny fanasana ireo mpanoratra rehetra, mba ho avy eny amin’ny Efitrano Dox, ao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy, ny alarobia 17 jolay izao, manomboka amin’ny 9 ora maraina.
“Izy ireo no fototra, ka asaina hizara hevitra sy hifandinika mikasika ny olana misy, sy hijerena ihany koa izay vahaolana tandrify ny minisitera”, hoy ny nambaran’ny tale misahana ireo tranomboky , Raonison Njaka, raha nakana fanazavana fanampiny mikasika ity fiantsoana ity.
Antsoina avokoa, na ireo mpanoratra efa namoaka boky, ka ireo vao manam-pikasana. Fotoana ampahafantarana ny lalan-kizorana mandrapahatonga any amin’ny famoahana boky ihany koa io. Efa ela rahateo no naneho hetaheta tamin’ny minisiteran’ny kolontsaina ny mba hijerena ny sehatry ny boky izy ireo, ka tonga izao ilay fotoana.